4 400 écoles fermées dans le Nord-ouest et le Sud-ouest du Cameroun à cause de l’insécurité - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » စီးပွားရေး » 4 400 écoles fermées dans le Nord-ouest et le Sud-ouest du Cameroun à cause de l’insécurité
4 400 ကျောင်းများဖြစ်သောကြောင့်မလုံခြုံမှုများမြောက်-အနောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်-အနောက်ဘက်ကင်မရွန်းအတွက်ပိတ်ထား
(Investir au Cameroun) – Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) vient de publier une note qui révèle que le nombre d’écoles fermées dans les quatre pays touchés par des crises dans le bassin du lac Tchad (Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria) est demeuré approximativement le même, passant de 981 à 1 054, entre la fin de 2017 et juin 2019.
Dans le cas précis du Cameroun, indique l’Unicef, l’insécurité qui se répand dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du paysaforcé plus de 4 400 écoles à fermer dans ces zones anglophones. Pour pallier la situation, l’organisme onusien indique qu’il coopère avec les autorités scolaires et les communautés afin d’appuyer des modes d’apprentissage alternatifs, notamment des centres d’apprentissage communautaires, la diffusion de cours à la radio, le recours à la technologie pour l’enseignement et l’apprentissage et des initiatives éducatives dans des structures confessionnelles.
"Au Cameroun, des cours et des messages pouvant sauver des vies sont radiodiffusés en de multiples langues afin que les enfants puissent apprendre en groupe en compagnie d’un animateur qualifié, ou encore individuellement dans leur propre foyer », affirme l’Unicef.
တစ်လူမှုနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းမြောက်ကိုရီးယားအနောက်နိုင်ငံများနှင့်ကင်မရွန်း၏အနောက်တောင်ထွက်ဖဲ့အဖြစ်သုံးနှစ်နီးပါးပါပဲ။ အကျပ်အတည်းရှေ့နေများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများကယူဆောင်ကော်ပိုရိတ်တောင်းဆိုမှုများအားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်ဟုပြောသည်။ အခြေအနေကသေခြင်းနှင့်လူဆိတ်ညံရာကိုဖြန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့်အတူအကြမ်းဖက်ခွဲထွက်ရေးတောင်းဆိုမှုများသို့လှည့်ထားသည်။
21 291 ကင်မရွန်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံး၏အဆိုအရနိုင်ဂျီးရီးယားမှစစ်တပ်နှင့်ခွဲထွက်ရေးများအကြားအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်တိုက်ပွဲများပြေးကြ၏။ နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခမှာအနည်းဆုံး 1850 20 တိုက်ပွဲများ၏လအကြာအဲဒီမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်ခန့်မှန်းထားသည်။
တစ်ဦးအကျပ်အတည်းအားဖြင့်တုန်လှုပ် Camair- Co. , ကင်မရွန်း၏လေကြောင်းလိုင်း၏ထိပ်စီမံခန့်ခွဲမှု,
CEMAC အတွက်ဘဏ်များ 151 ဘီလီယံခန့် CFA ပြင်သစ်နိုင်ငံ Beac ကနေမေတ္တာရပ်ခံငွေဖြစ်လွယ်၏ပမာဏကိုလျှော့ချပါပြီ
Foot OM – OM : Attention, Villas-Boas parle podium et OL – Olympique Lyonnais – FOOT 01